“Cudurka kaa Gala Fardaha, haddii lagu gubo dameer, Dawada lama gaadhayee”. Jamaal Cali Xuseen | Duul News International
“Cudurka kaa Gala Fardaha, haddii lagu gubo dameer, Dawada lama gaadhayee”. Jamaal Cali Xuseen	Duulnews)-Musharaxa Jagada Madaxtinimo Ee Xisbiga Mucaaradka ah ee Ucid,ayaa markii ugu horaysay kaga hadlay isku-shaandhayntii uu dhawaan madaxweyne Siilaanyo ku sameeyay Xukuumadiisa,taasoo saamaysay Xubno Culus oo ka tirsan Golaha Wasiirada Xukuumada Madaxweyne Siilaanyo.
War qoraal ah uu ku baahiyay barta uu Facebooga ku leeyahay,ayaa waxa uu u dhignaa sida tan: “Cudurka kaa Gala Fardaha, haddii lagu gubo dameer, Dawada lama gaadhayee. Hees bay ahayd ay Khadra Daahir ku luqeyn jirtay. Mr Garaad oo ahaa wasiirkii hore ee Shaqadda iyo Arrimaha Bulshadda maan filaneynin in la eryo isagoo buka oo cisbitaalka yaalla oo ay ahayd inay xukuumaddu xaaladiisa caafimaad caawimo ka geysato. Waxa ka sii daran in aanu madaxweynahu aanu weli ku booqan mr Garaad cisbitaalka marka laga reebo madaxweyne ku xigeenka oo xigto ahaan ku booqday. Ninbaa laga hayaa haddii dhadhaaradda la badelo oo meeshay yaalleen mid kasta laga kaxeeyo oo midba gees la geeyo; Dheriga dhadhankiisa waxba iskamay badelin. Taas waxa ka dhigan arrinkan loogu yeedhay Isku shaandheyn laakiin runtii aad uga fog xaqiiqda.. Qofka hogaamiyaha ahi waa inuu dhegaystaa dareenka shacabka iyo cabashooyinka jira iyo dadka xilkooda ka soo bixi waayey.. Waxa ka muuqata isku shaandheyntani cadaalad daro kale oo hor leh. Nabarkii dusha ayuunbaa laga dhayey ee boogtu waa sideeddii. Wasiiraddii laga cabanaayey ee dhinaca madaxweynaha ahaa lama taaban weli, laakiin dad kale ayeey ku meeraysteen. Nimankii boqolka jeer dulmigga ka galay ummadduna weli kibir ayeey la dibiro dhacsanayaan. Allahayow ka samo bixi qarankan curdinka ah indho la’aantan iyo boobkan lagu waddo.